सेनाले पेन्सनको अवधि घटाउने, प्रहरीमा के हुन्छ ? « Drishti News
सेनाले पेन्सनको अवधि घटाउने, प्रहरीमा के हुन्छ ?
नेपाली सेनाले निवृत्तिभरण(पेन्सन)को सेवा अवधि घटाउने भएको छ । तल्लो तहका सैनिकको मागअनुसार सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा यससम्बन्धि प्रस्ताव पठाएको छ ।
‘प्रधानसेनापति रोलकल’ कार्यक्रममा तल्लो तहका सैनिकको सबैभन्दा धेरै गुनासो निवृत्तिकरणको सेवाअधि १६ वर्ष बनाउन माग भएपछि सेनाले सोहीअनुसार ऐन संशोधनका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । हाल पेन्सन लिएर निवृत्तिभरणका लागि २० वर्ष सेवाअवधि पुग्नुपर्ने प्रावधान छ ।
निवृत्तिभरणको उमेर घटाउने प्रस्वतामा प्रधानसेनापति थापा सुरुमा सकारात्मक थिएनन् । तर, अत्याधिक गुनासो आएपछि उनले यसमा संशोधन प्रक्रिय अघि बढाएका छन् । तर, जागिर छाडेर विदेश नजान उनले आग्रह गरेका छन् । यससम्बन्धिमा मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने–
प्रहरीमा के हुन्छ ?
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि पेन्सनको अवधि १६ वर्ष बनाउन माग हुँदै आएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा समेत यससम्बन्धि मुद्दा परेको छ । पेन्सन अवधि पुगेपछि राजिनामा दिएर अन्य काम गर्ने प्रवृत्ती छ ।
सरकारले यससम्बन्धि प्रावधान संशोधन गरे सबै सुरक्षा निकायलाई लागू हुने गरी गर्ने छ । सेनाको मात्र संशोधन नहुने स्रोत बताउँछ ।